Puntland Yey Dulmane u tahay ? WQ.Eng. Daahir Abshir Faarax Jeer
Tuesday November 01, 2016 - 03:43:16 in Wararka by Super Admin
Intaan su'aashan jawaabteeda uguda galin aan wax yar ku nasto oo tooshka la dul tago hordhac yar oo ku saabsan meesha laga rabay Puntland inay joogto manta. Dowlada puntland waa 18 sano jir aan joogin meeshii laga rabay manta midaas oo ka m
Intaan su'aashan jawaabteeda uguda galin aan wax yar ku nasto oo tooshka la dul tago hordhac yar oo ku saabsan meesha laga rabay Puntland inay joogto manta. Dowlada puntland waa 18 sano jir aan joogin meeshii laga rabay manta midaas oo ka markhaati kacaysa dib u dhaca ku yimi horumarkii iyo dowladnimo wanaagii la doonayey inay ku talaabsato , balse waxaa meesha ku jirah oon cidna ka qarsoonayn in waxbadan laga qabtay hormarka iyo hanaanka dowladnimada waana sababta keentay inaan ka faaloodo hormar la doonayey in laqabto.
Waxaana hadaladisa kamidaa "puntland waa 2gobol iyo bar” iyo "Gaakacayo waa magaalo galmudug”